Ciidamo loogu tala galay sugida amniga doorashada madaxweynaha Somalia oo Muqdisho soo gaaray
Updated About:284 days ago 0
Ururka Midowga Africa ayaa Muqdisho usoo diray ciidamo boolis ah oo sugi doona amniga doorashooyinka la filayo in bishaan ay ka dhacaan magaalada Muqdisho.
Afhayeenka ciidamada AMISOM, Coll. Cali Xumad oo caawa la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa xaqiijiyey in ciidamo boolis ah oo ka tirsan AMISOM ay Muqdisho soo gaareen kuwaas oo ka socda dalka Uganda.
Waxa kale oo uu sheegay in dhawaan la filayo ciidamo kale oo ka socda dalalka Nigeira, Siera Leone, iyo Jabuti imaan doonaan Muqdisho kuwaasi iyagna ah ciidamo kale oo boolis ah.
“Ciidamadaasi maanta ilaa daraad ayey imaanayeen, waa kuwo boolis oo howlgal gaar ah la galaya ciidamada booliska Soomaaliyeed, kuwo u horeeya waxay ka yimaadeen Uganda, waxa jira kuwo kale oo Nigeria ah, Siera Leone iyo Jabuti,” ayuu yiri.
Mr. Xumad oo ah nin u dhashay dalka Jabuuti ayaa dhanka kale ka sheekeeyey howlaha ay sida gaarka ah u qaban doonaan iyo cida ay iska kaashan doonaan amaanka.
“Amaanka waa shaqada aan u joogno AMISOM waxay sugi doontaa amaanka shacabka Soomaaliyeed, doorashooyinka fiiro gaar ah ayey leedahay waxaana la tashanaa dhamaan ciidamada Soomaalida iyo kuwa AMISOM, waan ognahay in dad badan oo qaswadayaal ay magaalada ku suganyihiin laakin sirdoonkeena ayaa ku daba jira,” ayuu yiri.
Amaanka ayaa haatan si weyn loo adkeeyey magaalada Muqdisho taasi oo qeyb ah sidi looga hortagi lahaa rabshado inta ay socdaan doorashooyinka madaxweynaha bishan August.